Home Wararka Somaliland oo Raaftay Ganacsato Koofurta Somaliya ka Soo Jeedda.
Somaliland oo Raaftay Ganacsato Koofurta Somaliya ka Soo Jeedda.
Wararka laga helayo magaalada Laascaanood ee gobalka Sool ayaa sheegaya in Booliiska magaalada ay xir xireen qaar ka mid ah dadka ku ganacsado magaalada kuwaas oo la sheegay in xalay illa saaka laga soo kala xir xiray xaafadaha kala duwan ee magaalada ay ka kooban tahay, waxaana hadda ganacsatada la xiray la isugu keenay Garoonka kubadda Cagta Cabdi Bile ee Magaalada Laascaanood.
Ganacsatada la xiray waxay ka soo jeedaan koonfur iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana xarigooda amray sirdoonka Somaliland. Waxaana wararka ku heleynaa in Qaar ka mid ah dadka la xiray loo geystay Jirdil xooggan, kadib markii looga shikiyay oo kaliya in ay xiriir la leeyihiin ururka Al-shabaab.
Sikastaba raafka ciidamada Somaliland ay sameynayaan ayaa yimid kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay magaalada ku soo bateen falalka amniga lidiga ku ah ayaa la leeyahay.
Hogaamiyayaasha Al-Shabaab waa badankood waxay ka soo jeedaan Somaliland, mana loo qabsado dadka Somaliland ka soo jeeda ee Koofurta jooga. Sidaas darteed dhacdadaan waxay u muuqataa mid habowsan inkasta oo ganacsatadaas lagu caddeeyo ay sax tahay in sharciga halkaas ka jira lagu qaado, kaas oo aan jir dil iyo darxumeyn qabiileysan ama degaameysan ahayn.